तिहारपछि बालबालिकालाई पहिलो फाइजर खोप | Nepal Ghatana
प्रकाशित : १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:२०
बाह्र वर्षमाथिका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको पहिलो खोप ‘फाइजर’ लगाइने भएको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत अमेरिकी सहयोगमा उपलब्ध भएको फाइजर–बायोएनटेकको पहिलो डोज तिहारपछि लगाइने छ ।
उहाँले खोपको निरन्तर आपूर्तिबाट कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानलाई विस्तार गरिने समेत बताउनुभयो । सरकारले सकेसम्म ४० लाख मात्रा मोडर्ना खोप एकै पटक ल्याउने गरी तयारी थालेको समेत सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । मोडर्ना खोप तिहारपछि ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको समेत जनाइएको छ ।
उहाँका अनुसार सम्भवतः सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा खोप ल्याइने छ । केही ढिला भएमा सन् २०२२ को सुरुसम्ममा आउने छ ।
उहाँका अनुसार दोस्रो डोज लगाएपछि देखिएको यो समस्यामा मुटुका मांसपेशी वा बाहिरी तह सुन्निएको थियो । यस्ता समस्या गम्भीर नभएका र उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएका छन् । खोप लगाएपछि छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, छिटोछिटो मुटु चल्ने आदि समस्या देखिए तुरुन्त अस्पताल गई मुटुसँग सम्बन्धित जाँच गराइहाल्नु पर्ने उहाँको सुझाव छ । फाइजर खोपको दुई डोज तीन हप्ताको अन्तरालमा दिइने मन्त्रालयले जनाइएको छ ।
दोस्रो वा बुस्टर डोजमा फरक खोप किन लगाउनु हुँदैन ?
ग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेलाई काठमाडौँका १९ ठाउँमा बुस्टर डोज